09771391484 (Yangon) English (EN)	မြန်မာ (MY)	E-mail seller	Shwe Car Services	Certified dealer	Your name
ကားတစ်စီးကို ကျပ် 100,000/- ဖြင့် ဆိပ်ကမ်းမှအပြီးအစီးဝန်ဆောင်မှုဖြင့်ထုတ်ပေးပါသည်။ က-ည-န မှတ်ပုံတင်ကြေး ၀ှီးတက်၊ အာမခံပရီမီယံ၊ အုံနာဘုတ်ရသည်အထိကို 85,000 ဖြင့် အပြီးအစီးဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ အမည်ခံလျှောက်ထားခြင်း၊ Bank Account ဖွင့်ပေးခြင်း USS ထည့်ပေးခြင်း၊ Import Permit လျှောက်ထားပေးခြင်း၊ နိုင်ငံခြားသို့ (TT) စနစ်ဖြင့် ငွေလွှဲပေးခြင်း၊ ဆိပ်ကမ်းမှ ပိုင်ရှင်၏နေထိုင်ရာသို့ “YOUR DOOR STEP” အရောက်ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ECL/TOYO FUJI/SINOR/NYK လိုင်းများဖြင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ထားသောကြောင့် အချိန်ကုန်သက်သာပြီး လျှင်မြန်သောသင်္ဘောဝန်ဆောင်မှု၊ အသက်သာဆုံးဈေးနှုန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ အသက်သာဆုံး One Stop Service ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ဂျပန် Auction House (120) ထဲမှကားများကို လူကြီးမင်းတို့စိတ်တိုင်းကျ လေလံဆွဲပြီး Yangon Port(ဆိပ်ကမ်းအရောက်) မှ “Your Door Step”(Yangon) Area(အိမ်အရောက်) ၀န်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။ Ratings
There are no comments for Shwe Car Services! Be the first to comment!
09:00 - 16:00 Tuesday:
09:00 - 16:00 Thursday:
09:00 - 16:00 Saturday:
Closed Services offered